▷ Ny tsara indrindra Aquarium KITS ho an'ny vao manomboka, iza no tokony hofidinao? | Ny trondro
Fitaovana aquarium feno no mety hanombohana azy, izany hoe ho an'ireo mpankafy ny tontolon'ny trondro sy aquarium izay te-hanomboka hanana aquarium azy manokana. Ho an'ny vidiny mirary, ny kitapo dia ahitana andian-singa izay hanamora ny fiainanao ary hanamboatra ny làlanao hahazoana Aquarium tonga lafatra.
Amin'ity lahatsoratra ity amin'ny aquarium feno dia ho hitantsika hoe iza ireo aquariums kendrena ireo, inona ireo singa ampidirin'izy ireo matetika sy ireo karazany samihafa, ankoatry ny hafa. Ho fanampin'izay, mamporisika anao koa izahay hamaky ity lahatsoratra ity momba ny thermometera Aquarium, singa iray hafa tena ilaina (sy mora vidy) hahazoana antoka fa salama ny hazandranoo.
1 Ny kitapo Aquarium tsara indrindra hanombohana azy
2 Natao ho an'iza ireo kitary akondro feno?
3 Inona no tokony hanana kitapo aquarium
3.2 Jiro LED
3.3 Heater rano
4 Karazana kitapo aquarium
4.2 Litera 40
4.3 Litera 60
4.4 Litera 100
4.5 Miaraka amin'ny kabinetra
5 Ahoana ny fikajiana ny trondro firy no ho tafiditra ao amin'ny aquarium
5.1 Haben'ny trondro
5.2 Firaisana ara-nofo
5.3 Zavamaniry sy kojakoja
6 Aiza no hividianana kitapo aquarium feno amidy
Ny kitapo Aquarium tsara indrindra hanombohana azy
Marina 15256 - Kit of ...
Natao ho an'iza ireo kitary akondro feno?
Ny kitapo aquarium feno dia mety hanombohana azy, ka izany indrindra no antony niavian'izy ireo manokana an'ireo mpitia trondro izay tsy dia teo intsony. ary mila vokatra misy ny fitaovana ilaina rehetra hanombohana izy ireo.
Araka ny ho hitantsika etsy ambany, kitapo mazàna dia ahitana andiana singa fototraNa dia miankina amin'ny kalitaon'ny (sy ny vidiny) an'ny akarium aza, ireo fitaovana ireo dia mety ho fototra sy tsotra na misy zavatra hafa, toy ny haingon-trano, fanaka ...
Ny zavatra tsara momba ny fisafidianana kit rehefa manomboka amin'ity fialamboly vaovao sy manaitaitra ity dia tsy hoe hanana ny fototra hanombohana fotsiny isika fa rehefa mandeha ny fotoana dia afaka misafidy ny hanatsara ireo singa izay aleontsika ao anaty aquarium antsika isika tsy mila manao fampanjariam-bola avo lenta toy izany.
Inona no tokony hanana kitapo aquarium
Kitety Aquarium dia mety ahitana zavatra maro, fa Ny tena fototra (ary ny zavatra tokony hotandremanao dia misy kalitao tsara kokoa) dia izao manaraka izao:
Ny singa manan-danja indrindra amin'ny aquarium (ankoatry ny trondro, mazava ho azy) dia ny sivana. Amin'ny ankapobeny, io no mampiavaka ny aquarium amin'ny fiara mifono trondro, satria amin'ireo dia mila manova tanteraka ny rano ianao, raha sivana no tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana azy hamerina azy madio amin'ny aquarium. Ho an'io dia ampiasainy, ho fanampin'ny milina, singa toy ny fibre voanio, karbonina na perlon, fitaovana mitovy amin'ny landihazo izay noresahintsika andro vitsivitsy lasa izay.
Ny sivana dia karazany roa: ny atitany, izay ampiasaina anaty rano anaty rano anaty rano, atondro ho an'ny aquarium kely na salantsalany, ary ny ety ivelany, voatondro ho an'ny aquarium lehibe kokoa.
Taloha, ny jiro aquarium dia nentina tamin'ny jiro vy halida, na dia izany aza Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, betsaka kokoa no voafidy ho an'ny LEDTsy hoe satria milay be ry zareo, dia manadio loko maro izy ireo ary tsara ny endriny, fa noho izy ireo mahomby kokoa noho ny angovo ary mamokatra hafanana kely kokoa, zavatra hankafizin'ny hazandranoo.
Raha ny tokony ho izy, ny jiro dia singa kanto iray ao amin'ny aquarium anao, na dia manana zavamaniry aza ianao (izany hoe aquarium ambolena) dia miova, satria ilaina hazavana ny photosynthesize ny zavamaniry.
Ny kitapo aquarium feno indrindra dia misy heater rano, fitaovana mifanaraka amin'ny anarany sy izany dia tompon'andraikitra amin'ny fanafanana ny rano amin'ny mari-pana tianao (Ao amin'ny tsotra indrindra dia tsy maintsy manamarina ny mari-pana amin'ny tanana ianao, miaraka amin'ny thermometer, raha ny feno indrindra kosa dia asio sensor izay mampihetsika sy manafoana ny heater ho azy). Ilaina indrindra ny heater raha miaina amin'ny toetrandro mangatsiaka ianao na raha manana aquarium trondro tropikaly.
Karazana kitapo aquarium
Raha momba ny fividianana kitapia aquarium dia angamba ny fanontaniana voalohany mipetraka amintsika dia ny isan'ny trondro azontsika ao anaty aquarium, fanontaniana sarotra kokoa noho ny toa azy (ao amin'ny fizarana manaraka dia ezahintsika hamaly azy fohy). Manaraka ny karazana kitapo, ny mahazatra indrindra Ireto manaraka ireto:
Ny aquarium kely indrindra rehetra, mazàna amin'ny toerana ampy fotsiny ho an'ny trondro sy zavamaniry vitsivitsy. Tena mahafatifaty izy ireo, satria mirehareha manana endrika miseho. Satria kely dia kely ny haben'ny rano ao aminy, ny kojakoja (amin'ny ankapobeny ny paompy sy ny sivana) dia mazàna tafiditra ao anaty aquarium, ary tsy dia misy toerana firy koa ao.
Aquarium kely lehibe kokoa, na dia mbola ao anatin'ny elanelam-potoana kely aza. Raha te hahalala ny isan'ny trondro azonao apetraka dia tsy maintsy isainao ny isan'ny zavamaniry, vatokely sy haingon-trano ampiasaina, ary koa ny haben'ny trondro rehefa olon-dehibe izy ireo. Raha ny mahazatra, ny kajy dia ho an'ny trondro 5 eo ho eo, na dia mety miovaova aza ny kajy, arakaraka ny haben'ny trondro. Noho izy tsy dia lehibe dia lehibe koa ireo aquariums ireo izay ahitana ny sivana, ary mety ho kojakoja hafa koa ao anatiny.
Ao anatin'ireo karazan-dranomasina madinidinika dia ahitantsika ireo 60 litatra, izay raha ny marina izy ireo no safidy tsara indrindra hanombohana. Ny aquarium kely sy lehibe dia sarotra kokoa ny mitantana, noho ny habeny indrindra, ny iray amin'ireo 60 litatra dia manana vola tonga lafatra hanombohana anao, satria tsy lehibe loatra na kely loatra. Matetika no mitazona trondro 8 ireo aquariums ireo.
Misy safidy tena milay izay ampidiro izay rehetra ilainao. Toy ny amin'ny aquarium kely kokoa, dia matetika izy ireo no efa napetraka ao anaty aquarium. Ny sasany koa dia mampiditra jiro andro aman'alina mba hanomezanao jiro marina an'ireo trondro sy zavamaniry anao.
Habe lehibe kokoa, izay trondro 12 eo ho eo no mety ho tafiditra, na izany aza, toy ny mahazatra, miankina amin'ny haben'ny biby, ny habaka nohazonin'ny kojakoja ... Ireo aquarium ireo dia tsy mifantoka loatra amin'ny vao manomboka intsony, fa natao ho an'ilay natomboka. Ireo kojakoja, toy ny sivana, dia tsy apetraka intsony ary indraindray aza ivelany, dia famantarana vaovao fa tsy azon'ny rehetra ampiasaina.
Miaraka amin'ny kabinetra
Aquarium miaraka amin'ny fanaka, Ankoatry ny maha iray amin'ireo lafo indrindra ao anaty lisitra, dia anisany koa ny fanaka mifanaraka amin'ny refin'ny aquarium. Ny tena mahaliana momba ireo maodely ireo dia ny hoe ao anaty fanaka dia azonao atao ny manana ny kojakoja ilainao, ankoatr'izay, misy ireo izay ahitana rafitra tafahoatra tampoka sy ny zava-drehetra. Tsy misy isalasalana, ny fomba tsara indrindra sy tsara indrindra ahazoana ny Aquarium.
Aquarium an-dranomasina Izy ireo no sarotra tehirizina indrindra, satria trondro marefo izy ireo ary mila manana rano milamina ianao, na mety hanelingelina ny tontolo iainana manontolo. Saingy izy ireo no tsara indrindra sy mahavariana indrindra. Izany dia milaza fa misy kitapo aquarium an-dranomasina izay manome anao fitaovana voalohany ilainao hanangonana azy, toy ny rafitra sivana ary na dia dimmer efa voamarina aza.
Ny aquarium mora indrindra dia misy zavatra iraisana roa: kely ny rano ananany ary rano velona izy ireo. Raha tsy te-hanasarotra ny fiainanao loatra ianao ary hanana trondro roa fotsiny dia vahaolana tsara ireo. Ianao dia mila mahazo antoka fa manana rafitra filtration tsara izy ireo ary mitazona azy ireo hadio. Mazava ho azy, raha manaikitra anao ilay bibikely ary te hividy trondro bebe kokoa ianao dia mila aquarium lehibe kokoa.
Ahoana ny fikajiana ny trondro firy no ho tafiditra ao amin'ny aquarium
Rehefa miresaka kajy firy ny trondro ho tafiditra ao anaty akarium anao, ny fitsipika mahazatra indrindra dia ny trondro iray centimetatra mifanaraka amin'ny rano isaky ny litatra. Izany no antony tsy maintsy hanaovanao kajy mifototra amin'ireto manaraka ireto:
Mazava ho azy, ny haben'ny trondro no zavatra voalohany tokony hojerena rehefa manisa hoe firy no ho tafiditra ao anaty aquarium. Ataovy hatrany ny kajy mifototra amin'ny halehiben'ny olon-dehibe tratran'ny trondro (imbetsaka, rehefa mividy azy ireo dia mbola tanora izy ireo ary tsy nahavita nitombo. Ary koa, miankina amin'ny karazana rano dia afaka mametraka trondro maromaro na vitsy ianao Ohatra, ao anaty aquarium an-dranomasina ny ampahany dia rano iray litatra isaky ny santimetatra refesin'ny trondro, raha antsasaky ny 0,5 santimetatra isaky ny litatra rano kosa ny rano madio.
Tsotra ny antony: raha manana trondro lahy sy vavy ianao, ary avelanao hanana safidy malalaka, hiteraka izy ireo, miaraka amin'izay ao anatin'ny fotoana fohy dia hanana aquarium feno anao. Trondro be loatra dia mety hitarika tsy ho kely kokoa amin'ny efitrano filomanosana, izay mety hiteraka ady amin'ny faritany, fa koa amin'ny fitomboan'ny potipoti-javatra (toy ny kotroka) izay tsy zakan'ny sivana, izay mety hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny rano ary, vokatr'izany, ny fahasalaman'ny hazandranoo.
Zavamaniry sy kojakoja
Farany, ny zavamaniry sy kojakoja (toy ny sarivongana) hapetranao ao anaty akarium dia miteraka antony iray ihany koa rehefa manisa hoe firy ny trondro hiditra ao amin'ny akarium anao, satria haka toerana izy ireo (hamela toerana kely hilomano) ary afaka hamokatra fako (zavamaniry velona farafaharatsiny). Toy izany koa no mitranga amin'ny vatokely amin'ny farany ambany, tsy maintsy manisa ny habetsaky ny volan'izy ireo ianao hanatanterahana ny kajy farany.
Aiza no hividianana kitapo aquarium feno amidy
Azonao atao ny mahita kitapo aquarium feno, amidy na tsia, amin'ny toerana vitsivitsy. Ireto misy ireto matetika:
AmazonNoho ny isan'ny aquarium sy ny vidiny samihafa dia mety manana ny safidy tadiavinao ianao. Ho fanampin'izay, zavatra tokony ho ao an-tsaina dia ny hoe manana rafitra fitaterana tena tsara izy, indrindra raha nifanaraka tamin'ny safidy Prime ianao, ka hanana ny aquarium ao an-trano ao anatin'ny fotoana fohy.
En fivarotana lehibe toa an'i Carrefour Misy ihany koa ny safidy mahaliana, na dia tsy dia misy karazany toy ny any amin'ny toerana hafa aza. Mba hahitana ny tolotra tsara indrindra, araho hatrany amin'ny Internet, satria misy safidy an-tserasera mahaliana sy fihenam-bidy tsara indrindra.
Farany, ao amin'ny fivarotana biby fiompy manokana toa an'i Kiwoko dia hahita aquarium maro samihafa koa ianao. Soso-kevitra indrindra ny hitsidihanao ny magazay ara-batana raha vao mividy aquarium voalohany ianao, satria ny mpivarotra dia afaka manampy be raha manana fanontaniana tokony hovaliana ianao.
Ny kitapo aquarium feno dia mety hanombohana satria manana ny fitaovana ilaina rehetra izy ireo hanangonana ny renirano kely (na ny ranomasina). Manantena izahay fa nanampy anao ity lahatsoratra ity. Lazao aminay, nividy kit rehetra ve ianao hanombohana sa nanomboka nanenjika azy ianao? Inona ny habe sy ny karazana amporisihinao? Inona no efa niainanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Accessories » Aquarium feno